मनोरंजन – TAJA PATRIKA
पूजालाई युद्धको बर्थडे पार्टी
अभिनेत्री पूजा शर्मा यसै सातादेखि ३० वर्ष लागिन् । जन्मदिन मनाउन उनी शनिबार बिहानदेखि बेलुकासम्म व्यस्त रहिन् । मन्दिरदेखि सुरु भएको उनको बर्थडे राति अबेर प्रेमी युद्ध बानियाँले होस्ट गरेको ‘क्लब फरेनहाइट’ सेलिब्रेसनमा टुंगिएको थियो । त्यही दिन वृद्धाश्रममा पुगेर उनले चामल बाँडिन् । लगत्तै फ्यानसँग दुई घण्टा बर्थडे मनाइन् । फ्यानले दुई लाख रुपैयाँभन्दा […]
‘केजीएफ–२’ले दोस्रो साता पनि राम्रो कमाइ गर्दै, कुन दिन कति कमायो ?
काठमाडौं । साउथका सुपरस्टार यश र सञ्जय दत्तको फिल्म ‘केजीएफः च्याप्टर २’ले दोस्रो साता पनि बक्स अफिसमा शानदार कमाइ गरिरहेको छ । यशको यस फिल्मको हिन्दी बेल्टले मात्रै पनि दोस्रो हप्तामै ३०० करोडको ठूलो आँकडा पार गरेको छ । ‘केजीएफः च्याप्टर २’ले एसएस राजामौलीको फिल्म ‘आरआरआर’लाई ठूलो पर्दामा चुनौती दिइरहेको छ । फिल्म रिलिजको पहिलो […]
आमा को सम्झना मा बनेको आधुनिक गीत झुपडी सार्वजनिक (भिडियो सहित)
काठमाडौं । परदेशमा रहेको छोरो र आमा घर परिवार बहिनी विचको प्रेमको भावलाई समेटेर तयार गरिएको झुपडी भर्खरै मात्र सार्वजनिक भएको छ। आमाको मुहारमा खुशी ल्याउनको लागी परिवारको मायाबाट टाडा भएका पिडालाई गीतमा ब्यक्त गरिएको छ । देव बोहराको शब्द तथा रमेश विश्वासको संगीत गीतमा रहेको यो गित मा केशव राज अवस्थी शिरीष को आवाज […]
नेपाली आधुनिक गित मेरो प्यारो गाउँ सार्वजनिक : भिडियो सहित
काठमाडौ । नेपाली गितसंगितको क्षेत्रमा लामो समयदेखि आवद्ध पुर्ण बिरहीको शव्द संगितमा भर्खरै मात्र आधुनिक गीत ”मेरो प्यारो गाउँ ” सार्वजनिक भएको छ। उक्त आधुनिक गितम पुर्ण बिरहीको शब्द संगित र स्वर रहेको छ । त्यस्तै गित लाई कृष्ण बाबूले निर्देशन र सम्पादन गर्नु भएको छ । गाउँ घर को सम्झना बिगत का पलहरु लाई […]
हुम्लामै पहिलो पटक गोठालाको कथामा आधारित म्युजिक भिडियो बन्याे
‘जिन्दगी अधुरो बनाई छोडी बाईगई माया’ सिमकोट, ३० असार। दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्लामा यहाँका युवाहरुले पूर्खालाई सम्झिँदै गोठालाको कथामा आधारित म्युजिक भिडियो निर्माण गरेका छन् । पछिल्लो समय मध्यपश्चिम तथा सुदूरपश्चिमको देउडा ठाडी भाका गीत लोप हुँदै गएपछि हुम्लाका युवाहरू मिलेर हुम्लामै देउडा गीतको म्युजिक भिडियो छायाङ्कन गरेका हुन् । देउडा संस्कृतिलाई माया गर्ने स्रष्टाहरूलाई […]
अभिनेत्री सारा सहायक निर्देशक सँग डेटिङ्गमा
मुम्बई(बलिउड लाइफ)– अभिनेत्री सारा अली खान बलिउडको नयाँ अभिनेत्रीहरुमा सबैभन्दा चर्चामा आउने अभिनेत्री पर्छिन् । उनी व्यावसायिक जीवनसँगै व्यक्तिगत जीवन पनि उत्तिकै चर्चाको विषय बनिरहेको छ । अभिनेता कार्तिक आर्यन, विजय देवरकोण्डालगायतका अभिनेतासँग यी अभिनेत्रीको नाम जोडिसकेको छ । अहिले भने यी अभिनेत्रीको नाम एक सहायक फिल्म निर्देशकसँग जोडिएको छ । सन् २०१८ मा रिलिज […]
पुष्प र वर्षाको ‘मनसँग मन’ पनि नयाँ वर्षमा रिलिज नहुने
काठमाडौं । यही नयाँ वर्षको अवसर पारेर रिलिज गर्ने भनिएको नेपाली चलचित्र ‘मनसँग मन’को प्रदर्शन स्थागित गरिएको छ । कोरोनाको प्रभाव बढेको भन्दै फिल्मको रिलिज स्थगित गर्नुपरेको निर्माण पक्षले जनाएको छ । भारतमा कोरोनाको महामारी बढेपछि रिलिजको तयारीमा रहेका बलिउडका फिल्मको प्रदर्शन धमाधम स्थगित गर्न थालिएको छ । त्यसको प्रभाव यतिबेला नेपालमा पनि परेको छ […]
होलीमा रंगका कारण हुने असरबाट कसरी जोगिने ?
आज (आइतबार) होली अर्थात रंगको पर्व। उत्सवको पर्व। होली आज उपत्यका लगायत देशका पहाडी जिल्लामा हर्ष उल्लासका साथ मनाइँदै छ। तराईका जिल्लाहरुमा भने होली पहाडी जिल्लाको भोलिपल्ट मनाउने गरिन्छ। होलीमा रंग खेल्नु। एक अर्कोलाई रंग दल्नु। अनुहारमा विभिन्न केमिकलयुक्त पेन्टहरु दल्नुलाई धेरै जसोले सामान्य रुपमा लिने गरेको पाइन्छ। किनकी यो रंगको पर्व हो, होलीमा नरंगीए […]
“पिरती छ धेरै”ले चर्चा कमाउँदै- भिडियो सहित ।
सुजन बिश्वकर्मा पछिल्लो समय डिजिटल बजारको नेपाली सांगीतिक बजार निकै व्यस्त देखिन्छ दिनप्रतिदिन धेरै संख्यामा गीतहरु धमाधम सार्वजनिक भएसँगै केही गीत छोटो समयमै करोड क्लबमा पुग्न सफल भएका छन । यसैबीच बिगत लामो समय देखि सांगीतिक क्षेत्रमा लय तथा शब्द सृजना गर्दै आएका गीतकार तथा संगीतकार प्रदिप अधिकारीको संगीत साथै रमेश बिजिको शब्द सृजनामा “पिरती […]
“व्युटी काली” ल्याउँदै मनोज ।
सुजन बिश्वकर्मा बिगत लामो समय देखि सांगीतिक क्षेत्रमा संघर्षरत बहु-प्रतिभाका धनी निर्देशक मनोज बि.क भावुकको निर्देशनमा “व्युटी कालीले” बोलको गीत छिट्टै बजारमा आउने भएको छ । भर्खर मात्रै भिडियो छायांकन सकिएको उक्त गीत निकै आशलाग्दो रहेको निर्देशक मनोजको भनाई छ आजसम्म निर्माण गरेका गीतहरू भन्दा केहि फरक प्रस्तुति दिने प्रयास गरेको हुँदा दर्शकहरुले मन पाराइदिनु […]